ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာ ဖတ်ရှုရတဲ့ ကာတွန်းများ (၁၅-၇-၂၀၁၃)
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာ ဖတ်ရှုရတဲ့ ကာတွန်းများ (၁၅-၇-၂၀၁၃)
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 1:16 AM
ယနေ.အချိန်အခါမှာ ဒေါ်စု ၊ ၈၈ ကျောင်းသားများ ၊
အစိုးရထဲက ထိပ်ပိုင်းများ ၊အစိုးရအဖွဲ.ထဲကအချို.အမတ်များနဲ.၀န်ကြီးများမရပ်မနား
၊ အဆက်မပြတ် ကမ္ဘာပတ် သွားလာနေကြတာတွေ.ရပါတယ် ။
ဘယ်ဘဏ္ဍာ ၊ဘယ်ငွေကြေးနဲ.သွားသွား ၊ဘယ်ကိစ္စတွေနဲ.
သူတို. အဆက်မပြတ် ကမ္ဘာပတ် သွားလာနေကြတာ ငါတို.ပြည်သူတွေအတွက်ဘဲ ၊ ရွှေပြည်တော်မျှော်တိုင်းဝေး
ဆိုတဲ. ကာလကို လွန်မြောက်တော.မယ် လို. မျှော်လင်.နေကြတယ် ။
မုဒိတာ အပြည်.နဲ.ပါ ၊
ဒါပေမယ်.ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသီးသီး ပြည်ပကို အဖြေရှာဖို.လား ၊တိုင်းပြည်ကောင်း
ဖို.လား ၊ အလည်ထွက်တာလား ၊ "လား" မျိုး စုံနဲ.ထွက်နေကြပေမယ်. မုဒိတာ အပြည်.နဲ.မျှော်.လင်.နေကြတဲ.ပြည်သူတွေမှာတော.
သတ်သေ လာမှုတွေ တနေ.တခြား ပေါများလာနေတယ် ၊ငွေ တန်ဘိုးကျလာနေတယ် ၊ ကုန်ဈေးနှုန်းတွေတက်လာနေတယ် ၊
ခဏခဏ သွားလေ.လာပြီး မြန်မာနိုင်ငံက ဆင်းရဲသား
တွေ ဆင်းရဲနေတာ စိတ်ဓါတ်တွေအောက်တန်းကြလို.၊
မိမိ စိတ်ဓါတ် နဲ.တန်တဲ. အဆင်.အတန်းနဲ.နေရတာ
ဆင်ဝှေ.ရန်ရှောင် အယူအဆမျိုး အုပ်ချုပ်တဲ.လူတန်းစားက ကျင်.သုံးလာမှကိုဘဲ ။
အဓိက ကတော. ၀ လုံး ကောင်းကောင်းမရေးတတ်ဘဲ
စာကောင်းကောင်း မရေးနိုင်ပါဘူး ၊
စိုးမိုးမှုကျင်.သုံးအောင် ၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးအောင်၊
မတောင်းဆိုနိုင် ၊ မရရှိနိုင် သေးဘဲနဲ. ဘာပြောင်းလဲမှုမှ
ပြည်တွင်းမှာ ဒါမရသေးဘဲ ပြည်ပချည်း သွားလိုက်လာလိုက်ဟာ တစ်ကိုယ်ရည် သာယာမှု ထက်
forgetting of life တော့မဖြစ်သင့်ဘူးတော့